Fandresena Lehibe Ho An’ny Olom-pirenena tao Makedonia ny Fitsapa-kevibahoaka Tao Amin’ny Tanàna Kely Manohitra ny Fitrandrahana Volamena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Mey 2017 5:57 GMT
Olom-pirenena nandatsa-bato tamin'ny fitsapa-kevi-bahoaka 23 Aprily 2017. Sary avy amin'i Marija Tegovska, CIVIL, nahazoana alalana ny fandefasana ny sary.
Gevgelija, tanàna kely any amin'ny faritra atsimon'i Makedonia no nametraka tantara tamin'ny 23 Aprily raha nifidy ny eny ny ankamaroan'ny mponina tamin'ny fitsapan-kevibahoaka ho fanakanana ny fanokafana toeram-pitrandrahana volamena ao amin'ny faritra izay atahoran'izy ireo fa hanimba ny tontolo iainana.
Nanonona ny vokatra voalohany navoakan'ny komitim-pifidianana monisipaly ny vavahadim-baovao an-toerana Gevgelija.net, izay nampiseho fa 98% tamin'ireo mpifidy no nankatoa ny fanatsaharana ny fitrandrahana. Tamin'ireo olom-pirenena Gevgelija miisa 19.458 voasoratra anarana tamin'ny Lisim-pifidianana, 13.097 no tsy mankasitraka ny fitrandrahana ary 154 kosa mankatoa. Miisa 68% ireo mpifidy nandray anjara, mihoatra ny 50%, isanjato takiana ho fanekena ny voka-pifidianana.
Manandanja noho ny antony maro ny fitsapakevi-bahoaka. Hatramin'ny 26 taona nahazoan'i Makedonia ny fahaleovantena, ity no nahomby indrindra, na tamin'ny fahatratrarana ny taham-pahavitrihana 50% na tamin'ny ankamaroan'ny mpifidy nandatsa-bato no nanohana ny fitakiana.
Naneho ny maha zava-dehibe ny fahasahian'ny olona mitaky ny tadiaviny ihany koa ny fandrotsaham-bato, ​​indrindra tamin'ny fotoana naha-voarohirohy ny antokon'ny fitondrana tamin'ny fanaovana hosoka amin'ny fifidianana.
Nanambara ny ONG sivily mpanaramaso ny fifidianana fa tontosa soa aman-tsara tao anatin'ny filaminana ny fitsapankevi-bahoaka, ary tsy nisy ny olana goavana, madinidinika ny tsy fanarahan-dalàna, tahaka ny tsy fahampiam-aovao avy amin'ny manampahefana, ary ireo tranga tamin'ireo vondrona mpifidy sy ny anaran'ireo mpifidy tsy hita tamin'ny lisi-pifidianana, saingy tsy nisy fiantraikany tamin'ny vokatra ankapobeny izany.
‘Ny volamena tokana ilainay dia ny zanakay’
Mbola natomboka tao amin'ny toeram-pitrandrahana volamena ao akaikin'ny tendrombohitra Kožuf ny fanorenana, satria nahazo fahazoan-dàlana ilaina avy amin'ny manam-pahefana ireo orinasa voakasika, izay manome alalana ho azy ireo hitrandraka. Nampikorontana ity tanàna an-tsisintany toa mangingina ity ny vinavina hanao fitrandrahana ao amin'ny faritra, izay ny varotra sy ny tolotra ho an'ny mpizahan-tany avy ao Gresy mpifanolo-bodirindrina aminy no ankamaroan'ny fidiram-bolan'ny olona. Taitra ny mponina satria mety hanimba tanteraka ny tontolo iainana ny toeram-pitrandrahana, anisan'izany ny fanapoizinana ny rano amin'ny cyanide, izay mety ho ampiasaina amin'ny fikarakarana ny akora volamena.
Nampiasa media sosialy ny tetikasa iray antsoina hoe “Fanavotana an'i Gevgelija” mba hanentanana ny olom-pirenena hanohitra ny “toeram-pitrandrahana volamena mahafaty.” Teny filamatra iray hafa koa ny hoe “Ny hany volamena ilainay dia ny zanakay.”
Sioka: #FanavotanaAniGevgelija #ReferendumFanavotana #ManohitraFitrandahanaMahafaty
Sary: “Fitsapa-kevibahoaka ho Fanavotana an'i Gevgelija: Tohero! 23.04.2017″; “Atsaharo ny Fitrandrahana Mahafaty!”; “Ny Hany Volamena Ilainay dia ny Zanakay”; “Atsaharo ny Volamena Maloto, Atsaharo ny Volamena Mahafaty, Tobim-pitrandrahana Volamena Konjsko, Fanavotana an'i Gevgelija [tsy ho tratran'ny] syanida.”
Ho famaliana ny ahiahian'ireo mpikatroka ara-tontolo iainana ao Gevgelija, nanao fanadihadiana tamin'ireo orinasa Kanadiana sy Amerikana izay nahazo ny fahazoan-dalana hitrandraka ao amin'ny Tendrombohitra Kožuf ny fandaharana, 360 Degrees avy amin'ny fahitalavitra lehibe iray tsy miankina. Hita tamin'izany fa ny iray amin'izy ireo, dia ny Reservoir Minerals dia orinasa off-shore avy ao amin'ny nosy Virijiny, ary notsongain'ny mpitantana ny orinasa ho nilaza fa sampan'ny orinasa Kanadiana iray izy. Tsy afaka namaritra mazava izay tena tompon'ity orinasa ity, izay manana fahazoan-dalana ihany koa hangady ny 20%-n'ny faritra Makedoniana misy tahiry mineraly ireo mpanao gazety.
Voalaza fa somary mora ny “manavao” taratasy tahaka izany hanaovana fanadihadiana haiankibonitany ho lasa fahazoan-dàlana hitrandraka, mitaky fankatoavana fotsiny avy amin'ny manampahefana ao amin'ny Minisiteran'ny Fitaterana sy ny Fifandraisana izany. Nahita ihany koa ny 360 degre fa matovy adiresy amin'ny tranobe iray ao Vancouver ihany koa ny orinasa iray hafa izay heverina ho tsy manana fifandraisana, ary nahazo fahazoan-dalana tahaka izany any amin'ny faritra hafa ao Makedonia.
Niteraka ahiahy fanampiny teo amin'reo manohitra ny toeram-pitrandrahana ao amin'ny Tendrombohitra Kožuf izany rehetra izany, satria taloha, avy amin'ny orinasa off-shore voalaza fa nifandray tamin'ireo manampahefan'ny antokon'ny fitondrana sy ny mpanohana azy ireo ny fampiasam-bola mivantana ataon'ny vahiny ao Makedonia.
Nanome fanazavana fanampiny tamin'ny alalan'ny Twitter ilay mpisolovava Aleksandar Tortevski. Nomarihiny fa mandalo ao amin'ny faritra Grika Halkidik ny fihadiana volamena, saingy noho ny fanohera'ny mponina ao an-toerana, nesorin'ny governemanta Grika ny fanomezana alalana fitrandrahana nomena ny orinasa Kanadiana hafa. Nilaza ihany koa izy fa voasoratra anarana ao Kanada noho ny antony manokana ilay orinasa mpitrandraka harena ankibon'ny tany:
Voasoratra anarana ao Kanada ny orinasa satria tsy manome onitra noho ny fahalotoana sy ny voka-dratsy ara-pahasalamana ateraky ny fampiasana syanida ny fitsarana ao aminy.
Lafiny iray hafa amin'ny adihevitra ny fialàn'ny tetikasa Ski Resort tao amin'ny Tendrombohitra Kožuf. Noheverina fa hisarika mpizahatany betsaka izany. Araka ny tatitra navoakan'ny 360 Degrees, tsy mba namboarin'ny governemanta ny lalana mankany amin'ila toera-pialan-tsasatra, izay nitarika ny tsy fahombiazan'ny ny tetikasa. Araka ny drafitra amin'izao fotoana izao izay nankatoavin'ny governemanta, ho ampiasaina amin'ny fitrandrahana malalaka ny faritra eo akaiky eo.
Manana tantara momba ny ady amin'ny loza ara-pahasalamana ireo mpikatroka ao Gevgelija. Nandritra ny taona maro, vondrona antsoina hoe Arsena no nitolona mba hanery ny manampahefana hamaha ny olana amin'ny habetsahan'ny arsenika manapoizina ny rano vatsiana ho an'ny daholobe. Nanaporofo izany tranga izany ny fanadihadiana momba ny rano amin'ny paompy nataon'ny ivon-toerana ara-pahasalamam-bahoaka ao Makedonia.
Raha nolavin'ny manam-pahefana ny fisian'ny poizina amin'ny rano, nanambara ny fisokafan'ny orinasa vaovao mikarakara ny rano izy ireo, ary koa fandavahana lava-drano vaovao mandritra izany vanim-potoana izany ihany, nanatontosa lanonana fanapahana kofehy mihitsy aza tamin'ny taona 2014. Nanomboka tamin'ny Febroary 2017 ny tena fanamboarana ny rafitra famatsian-drano vaovao noho ny tetikasa vatsian'ny Vondrona Eoropeana.
Toeram-pifidianana ao an-tanànan'i Miravci, Gevgelija, tsy azo idiran'ny olona manana fahasembanana. Sary avy amin'i Xhabir Deralla, CIVIL, nahazoana alalana ny famoahana ny sary.
Tsy misy sotasota – tsy tahaka ny referandaoma taloha
Nanamaivamaivana ireo mpanara-maso ny fifidianana marobe ny fahombiazan'ny fitsapa-kevibahoaka, satria natahotra ry zareo sao “hosotasotain'ny” antokon'ny fitondrana VMRO-DPMNE indray izany fifidianana izany, tahaka ny nataon'izy ireo mba hiarovana ny fitoeran'ny Foibe Ara-barotra malaza (GTC) tao Skopke, renivohitra Makedoniana tamin'ny taona 2015 Tsy nahomby izany fitsapankevi-bahoaka izany, satria ambanin'ny ara-dalàna ny taham-pandraisana anjaran'ny mpifidy.
Niampanga ny governemanta ho nanome baiko ireo mpanohana azy tsy handray anjara ny mpanohitra tamin'izany fotoana izany. Nolavin'ny manampahefan'ny antokon'ny fitondrana tamin'ny fomba ofisialy anefa izany filazana izany. Na izany aza, afaka niditra tamin'ny firaketana an-tsoratry ny fifidianana ireo antoko politika tao Makedonia ary afaka nahita izay nandray anjara tamin'ny fifidianana, noho izany, mora ho azy ireo ny manamarina raha nankatò ny baiko tsy handraisana anjara ireo mpanohana ny fitondrana. Tao anatin'ny toe-javatra tahaka izany, tsy mahasahy mandeha mifidy ireo Makedoniana matahotra ny fiantraikan'ny tsy fankatoavana ny baiko.
Lafin-javatra iray hafa voampanga fa tsy nampahomby ny fitsapan-kevibahoaka koa ilay antsoina hoe mpifidy matoatoa nampidirina tao anatin'ny Lisi-pifidianana – arakaraka ny fahamaroan'ny mpifidy anaty lisitra no tsy maintsy ilaina mpifidy marobe handray anjara mba hahatrarana ny mihoatra ny 50%. Nampiseho ny resaka an-tariby tafaporitsaka teo amin'ny minisitry ny governemanta fa ny kaominina Centar ao Skopje no nokendrena manokana tamin'ny fampidirana mpifidy matoatoa maro anaty lisitra.
Mandritra izany, noho ny fanavaozana mikasika ny fifidianana ankapobeny ao amin'ny firenena, nohamarinina sy “nodiovina” ny faritra sasany tamin'ny Lisi-pifidianana. Noho izany, naseho ho fanehoana ara-dalàna ny sitrapon'ny vahoaka tao an-toerana ny taham-pahavitrihana goavana tao Gevgelija .
Na izany aza, tsy manankery araka ny lalàna ny valin'ny fitsapan-kevibahoaka tao Gevgelija. Miankina amin'ny governemanta, indrindra amin'ny Minisitry ny Fitaterana sy ny Fifandraisana sisa ny manafoana ny fahazoan-dalana hitrandraka.